Maxay tahay tallaabada ay qaadayaan ciidamada Mareykanka haddii TPLF soo gasho Addi Ababa? | Dalkaan.com
Home Warkii Maxay tahay tallaabada ay qaadayaan ciidamada Mareykanka haddii TPLF soo gasho Addi...
Addis Ababa (dalkaan) – Ciidamada mareykanka ee fadhigoodu yahay dalka Jabuti ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin inay ka qeyb qaataan sidii loo xalin lahaa qalalaasaha ka taagan dalka Itoobiya.
Saraakiisha hoogaamineysa ciidamada ayaa carabka ku dhuftay in tan iyo November sanadkii hore ay aad u kacsaneyd xaaladda gobalka taasna ay sababtay dagaalka ka socda dalka deriskooda ah.
William Zana oo ah Jeneraal sare oo ka tirsan ciidamada Mareykanka ee fadhigoodu uu yahay Jabuuti ayaa yiri “Ciidamada Mareykanka halkan waxey u joogaan inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka gobalka”.
Hadalkaan ayaa yimid kadib markii Bayaan ay soo saartay Waaxda Maaliyadda Mareykanka ay ku sheegtay in liiska madow lagu daray ciidamada Eritrea, Hoggaanka xisbiga talada haya ee FDFJ, la taliyaha dhaqaalaha ee xisbiga iyo madaxa xafiiska amniga Eritrea, iyadoo lagu eedeeyay inay gacan ka geysteen colaadda sanad jirsatay ee ka socota dalka Itoobiya.
Previous articleMaxay tahay tallaabada ay ciidamada Mareykanka qaadi doonaan haddii ay kooxda TPLF soo gasho Addi Ababa?
Next articleXavi oo doonaya in Thiago Alcantara uu dib ugu soo laabto Barcelona.